Munyika yanhasi, Jewelry zvitoro vari vamanikidzwa kuti pave vave nechekuita kunotenga ruzivo kune vatengi - munhu achava nokuona, informational uye kunakidza. Vari pasi taifanira kuvaka mutengi ukama, kiyi hachisi kutema pasi mari, zviri kupa nyaya uye nani pfungwa kuti zvishongo. Digital signage anogona kupindira kubatsira zvishongo muzvitoro nokuvapa kwepamusoro uye kudyidzana mhinduro. Specialy ari njenjemera akatungamirira vakaratidza, kupa munhu akakwana kuratidzwa mhinduro kuti zvishongo chitoro.
Uwedzere Sales zvenyu
Chinhu yakaonekwa kuti ndeyechokwadi yokuti anoratidza kunzwa okutengesa. With digitaalinen signage, unogona kuita kuti, uye ndizvo chete kutanga. Kunokubatsira kutora mamwe kudzora mutengi zvitoro maitiro.
Kufanana TV, anodhinda, uye redhiyo, akatungamirira mavhidhiyo signage akadzvinya kutarisirwa munyika unopinza chaizvo uye yakajeka nzira. The yepamusoro kuratidzirana namavara inopenya anokwanisa zvinosanganisira zvinhu zvakafanana nhau anodyisa uye paIndaneti vhidhiyo rinobvumira telemarketers kuti kubudikidza ruzha uye batanidza nemakasitoma.
Messages hazvigoni kungotariswa
With digitaalinen signage, unogona kuvandudza rokutengesa dzenyu nokutora zvakawanda uchizvisarudzira vatengi 'kutenga maitiro, nokutaura mashoko, mashoko, uye dzinovabata pfungwa dzavo pasina kukundikana. Achibatsirwa mavara, mavhidhiyo, anopenga Graphics, Animations, digitaalinen signage isa mashoko yenyu vatengi 'pfungwa-dzezvimwe.
Web connectivity uye akakodzera Accessibility
Digital signage inogona chokuita Indaneti uye kudzora munharaunda kana ari kure. Unogona zvinosanganisira Twitter Feeds, okunze ezvinhu, mavhidhiyo kugutsikana, nhau anodyisa, uye Blog pambiru ari kuratidzwa. Somuenzaniso, kana ari akatungamirira kuratidza zviri zvipfeko chitoro showroom, vamwe fashoni mazano kana trendy zvipfeko mavhidhiyo kungaratidzwa kuponesa nguva vatengi vake.
Zvinosimbisa kutenga sarudzo
With maererano pakuzadzisa Vanosarudzwa vateereri vako, kuwadzana vatengi zvinobudirira uye generating zvakawanda kwemari kunokosha. Uye, nokuti, digitaalinen kuratidzwa ndiyo mhinduro yakakwana kufurira kutenga sarudzo.
Kukwikwidzana mune ichi ano nguva zvishongo mabhizimisi vanofanira anoratidza kuti vatengi vavo 'Zvakaitika panguva chitoro kwako chitoro inofanira both- zvinoorora uye zvinofadza. Achibatsirwa customized kwakaita Video Signage yokugadza, mumwe anogona kusangana zvavo bhizimisi 'zvinodiwa.